ချစ်ကြည်အေး: အမေအိုရဲ့ အိမ်အပြန်
အဖေ့ရဲ့ သမီး၊ အဘိုးရဲ့မြေး
***ကမ္ဘာပေါ်က အမေနှင့်သားများ အတွက်...
လသာည Wed Nov 24, 02:26:00 PM GMT+8
ဆုံတွေ့ခန်းလေးက တကယ့်ကို ရင်ထဲကို ဆိုနစ်လိုက်၊ ကြည်နှုးလိုက်နဲ့ .. ခံစားမှုတွေ စုံနေတာပါပဲ..
အခုလည်း မမချစ်ရဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ မျောပါသွားတယ်။
သဒ္ဓါလှိုင်း Wed Nov 24, 02:27:00 PM GMT+8
ဝေးကွာနေရတဲ့ သားအမိမေတ္တာကိုတွေ့ရတော့ ၀မ်းနည်းမိတယ်.။
TURN-ON-IDEAS Wed Nov 24, 02:55:00 PM GMT+8
အားလုံးထက် နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ နေရာက အမြဲရင်ဖွင့်ထားပေမဲ့ လစ်ဟာနေဆဲ နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်တွေအတွက် ...
ငါတို့တွေ ဘာလုပ်ကြမလဲ ...
ဇွန်မိုးစက် Wed Nov 24, 03:09:00 PM GMT+8
ထိထိခိုက်ခိုက်ပါပဲ... ခံစားမှုက ပူနွေးနေဆဲဆိုတော့...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မဆုံတွေ့နိုင်သေးတဲ့ သားအမိတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။
(ဇွန့်အစ်ကိုဝမ်းကွဲနဲ့ သူ့အမေဆို အကြောင်းကြောင့် တစ်နိုင်ငံစီဝေးပြီး မတွေ့ရတာ ၁၇နှစ်တောင် ရှိသွားပြီ)
ZT Wed Nov 24, 03:35:00 PM GMT+8
မိခင်မေတ္တာက အကြီးမားဆုံးတဲ့။ သားတွေကို ပစ်ပြီး နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုး အတွက် ပေးဆပ်ရဲတဲ့ သတ္တိဟာ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သားနဲ့ ပြန်ဆုံခွင့် ရတဲ့ အမေ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။
Vista Wed Nov 24, 03:39:00 PM GMT+8
Anonymous Wed Nov 24, 04:16:00 PM GMT+8
အမေ မအိုသေးပါဘူး အမချစ်ရယ် သားနဲ့အပြိုင် နုပျိုလန်းဆန်းလှပနေဆဲ အမေပါဗျာ ၀မ်းသာကြည်နူးပျော်ရွှင်မိပါတယ် အမေအများကြီး လုပ်စရာတွေရှိနေသေးတယ်နော် အမေမအိုသေးပါဗျာ။
Anonymous Wed Nov 24, 05:21:00 PM GMT+8
အစ်မချစ်ရည်ရွယ်တဲ့ အမေအိုက အန်တီစုတို့သားအမိကို ဘေးကနေကြည့်ပြီး မျက်ရည်လည်ရတဲ့ အမေအိုပါ အစ်မစည်းစိမ်ရဲ့။ ဟုတ်တယ်နော် အစ်မချစ်။ ကဗျာကို နောက်တခါထပ်ခံစားကြည့်ပါအုံး အစ်မစည်းစိမ် :-))
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Wed Nov 24, 06:18:00 PM GMT+8
ဝက်ဝံလေး Wed Nov 24, 06:18:00 PM GMT+8
သူ့သားထက်တောင် နုနေသလားလို့ မျက်နှာကလဲ အမြဲ အပြုံးပန်းဆင်ထားတာ အမေ မအိုသေးပါဘူး မချစ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Wed Nov 24, 06:40:00 PM GMT+8
သနားစရာ၊ ကြည်နူးစရာ၊ ၀မ်းနည်းစရာ မြင်ကွင်းက မျက်စိထဲက မထွက်ပါဘူး
ဘယ်မိသားစုမှ မကွဲကွာစေချင်ပါဘူး နော်
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး ခံစားရတယ်.. အစ်မရေ..
Anonymous Wed Nov 24, 07:18:00 PM GMT+8
အပေါ်က anonymous ရေ ကျေးဇူးနော်
Shinlay Wed Nov 24, 07:50:00 PM GMT+8
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Wed Nov 24, 09:03:00 PM GMT+8
မိသားစုတွေ...တကွဲတပြားစီ နေရခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ....
အင်ကြင်းသန့် Wed Nov 24, 09:47:00 PM GMT+8
အမေနဲ့ဝေးနေကြတဲ့သူတွေ အမေ့ရင်ခွင်ထဲကို အမြန်ဆုံးခိုဝင်နိုင်ခွင့်ရကြပါစေ....
ငွေစန္ဒာ Wed Nov 24, 10:29:00 PM GMT+8
မြစ်ကျိုးအင်း Wed Nov 24, 10:48:00 PM GMT+8
ကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တောင် ပီတိဖြစ်ရတယ်။
ခံစားချက်တွေကို မျိုသိပ်ပြီး နိင်ငံအတွက် အနစ်နာခံ ပေးလို့
သူမဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိခင်ပါပဲ။
Anonymous Thu Nov 25, 12:26:00 AM GMT+8
၈၈ ကနေ ဒီနေ့ထိ မတွေ့ရသေးတဲ့အမေနဲ့သားတွေ ၊
ညီမရေ... ဖတ်ရင်းနဲ့ ထိခိုက်ခံစားမိတယ်..
ညီမလေး Thu Nov 25, 10:40:00 AM GMT+8
ကြည့်ရတာ ဘယ်လိုကို ကြည်နူးစရာကောင်းမှန်းမသိဘူး ချစ်ချစ်ရယ် ... ချစ်ချစ်ကဗျာကို ဖတ်ရတော့ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာခံစားရတယ် ။
ချစ်ချစ် ညီမလေး ဘာတွေက လွတ်မြောက်ချင်နေသလဲဆိုတာ ၂ကိုယ်ကြားပြောမှဖြစ်မယ်းP
ဖွတ်ခေါက်နည်းတော့ ညီမလေးထွင်လိုက်ပါအုန်းမယ် ချစ်ချစ်ကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ပေါ့းD
Anonymous Thu Nov 25, 12:19:00 PM GMT+8
An Asian Tour Operator Thu Nov 25, 02:14:00 PM GMT+8
ရင်ထဲ က အမေ အမြဲနုပျိုနေဆဲ..။
Anonymous Fri Nov 26, 06:25:00 AM GMT+8
ခက်တာပဲ။ လူတွေက ကဗျာကိုသေချာလဲမဖတ်ပဲနဲ့ အမေမအိုသေးဘူး နုပျိုတယ်ပဲ ထပ်ကာ ထပ်ကာပြောနေကြတယ်။ အမေအိုဆိုတာ ဒို့အားလုံးရဲ့ အမေစုကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောတဲ့သူကပြောတာတောင်။ ကဗျာရေးရတဲ့သူတော့မသိဘူး ကြားကဖတ်တဲ့သူကတောင် ရေးတဲ့သူကို အားနာရတယ်။ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကဗျာကို။ ဗမာလိုကောင်းကောင်းပဲ နားမလည်တာလား။ မခံစားတတ်ကြတာလား။ စာဖတ်ရှမ်းကြတာလားတော့မသိ။
မောင်ကောင်း Fri Nov 26, 10:59:00 AM GMT+8
အမရေ ..အမိအရ မှတ်တမ်းတင်လိုက်တာပါပဲလား.. ကလောင်ထက်နေတယ်ပေါ့ ..ချီးကျူးပါတယ်..
Anonymous Fri Nov 26, 05:47:00 PM GMT+8
ဟဲ..ဟဲ ဟုတ်ပ အမေခြင်း မှားသွားလို့
Anonymous Fri Nov 26, 11:31:00 PM GMT+8
ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်လို့ ၀င်ပြောလိုက်ပါရစေ Fri Nov 26, 06:25:00 AM >>Anonymous
ဆရာကြီးလိုလို ဘာလိုလို ရေးချင်ရင်လဲ သေချာ နားလည်မှ ရေးစေချင်တယ်.. ကဗျာမှာပါတဲ့
အမေ ကြည်နူးစေ ” ဆိုတဲ့စာသားကို နားမလည်ဘူးထင်ပါတယ်နော်...
ဘယ်သူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာ ဘာတက်တူးထိုးထားတယ်ဆိုတာ ဗဟုသုတမှရှိပါရဲ့လား .. သတင်းတွေရော ကြည့်ပါရဲ့လား...
လူတိုင်းက ဖတ်ပြီး နားလည်ကြပေမဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း နားမလည်ဘဲ ဇွတ်လာရေးနေတယ်.. ဒီကော်မန့်လေး ဖတ်ပြီးရင် သတင်းဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါဦးနော်
ဘယ်သူ့လက်မောင်းမှာ တက်တူးများရှိနေလဲ.. ဘာတက်တူးလဲဆိုတာ
Unknown Sat Nov 27, 02:52:00 PM GMT+8
သတင်းဖတ်မိပြီး ၀မ်းသာနေတုန်း အစ်မကဗျာလေး ထပ်ဖတ်လိုက်ရတော့ ကြည်နူးသွားမိတယ် အစ်မရေ...
Anonymous Sun Nov 28, 05:40:00 AM GMT+8
ွှTo: Anonymous Fri Nov 26, 11:31:00 PM SGT
ွှဘယ်လိုမှ မနေနိုင်လို့ ၀င်ပြောလိုက်ပါရစေ Fri Nov 26, 06:25:00 AM >>Anonymous
ဆရာကြီးလိုလို ဘာလိုလို ရေးချင်ရင်လဲ သေချာ နားလည်မှ ရေးစေချင်တယ်.. ( ဘုရားရေ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တက်တူးဆီရောက်သွားပါလိမ့်) ကွန်မန့်ကိုသေချာဖတ်ကြည့်ပါအုံး။ ဒီကဗျာထဲမှာ အမေနှစ်ယောက်ပါတယ်။ အမေတစ်ယောက်က သားကိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးတဲ့အမေ (ဒေါ်စု)၊ နောက်တစ်ယောက်က ဒီသားအမိကို ကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျတဲ့အမေအို... ဒါတွေကို သေချာမဖတ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေက ဒေါ်စုကို အစ်မချစ်က အမေအိုလို့ အမည်ပေးထားတယ်ထင်လို့ ဒေါ်စုမအိုသေးပါဘူးပြောနေကြလို့ ပြောထားတာ။ ဘာတွေများမှားလို့ လက်ကတက်တူးဆီရောက်သွားတာပါလိမ့်